သမိုင်းအဆက်ဆက်မှာ ဇရာကို ပေါက်ကရနည်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုအံတုခဲ့လဲ
6 Feb 2018 . 11:56 AM
ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဇရာကို ပေါက်ကရနည်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုအံတုခဲ့လဲ
မြန်မာတွေမှာတော့ အမျိုးသားတစ်ယောက် ကလေးရအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဆိတ်ဝှေးစေ့ စားရတာတို့၊ ကလေးတွေ အသက်၅နှစ်လောက် ရောက်တဲ့အထိ စကားမပြောတတ်သေးရင် ကြက်ဖင်ဆီဖူး စားရတာတွေကတော့ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သိပ္ပံပညာနဲ့ကြည့်ရင် တခြားသူတွေက ပေါကြောင်ကြောင်လို့ပဲမြင်ပါစေဦး ကိုယ့်တွေကတော့ လုပ်မြဲတိုင်း လုပ်နေဦးမှာပဲ။ ဒီလိုပါပဲ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်း အို ၊ နာ ၊ သေကို အံတုခဲ့တဲ့ ဆေးပညာကြိုးပမ်းမှုတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ မြည်းနို့နဲ့ ရေချိုးခဲ့တဲ့ အီဂျစ်ဘုရင်မ ကယ်လီယို ပတ်ထရာ (ဘီစီ ၁ရာစု)
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂ထောင်ကျော်က အီဂျစ်ဘုရင်မ ကယ်လီယို ပတ်ထရာ (Queen Cleopatra) ဟာ အသားအရေလှပဖို့အတွက် အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ မြည်းနို့နဲ့ ရေချိုးခဲ့ပါတယ်။ အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ မြည်းနို့မှာ ပါဝင်တဲ့ လက်တစ်အက်ဆစ် (Latic Acid) ဟာ အရေပြားရဲ့အပေါ်ဆုံးအလွှာမှရှိတဲ့ နူးညံ့ချောမွေ့စေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြည်းနို့နဲ့ ရေချိုးခဲ့တဲ့ အီဂျစ်ဘုရင်မ ကယ်လီယို ပတ်ထရာ
ဘုရင်ကြီး ဂျူးလီးယက်ဆီဇာဟာ ဆံပင်အနည်းငယ်ပြောင်လာတဲ့အတွက် ဆံပင်တွေပြန်ပေါက်ဖုိ့ ဆေးဝါးတွေ သုံးခဲ့ပါသေးတယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ မိတ်ကပ်ကို မိကျောင်းချေးနဲ့ ဖော်စပ်ပြီးတော့ လိမ်းခြယ်လေ့ရှိပြီး မျက်လုံးတွေကို ကြေးစိမ်း၊ ခဲမဲတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျတွေးကြည့်ရင် ထူးဆန်းလှပေမယ့် သူ့ခေတ်သူ့ခါတုန်းက အိုမင်းလာတဲ့ ဇရာကို အံတုခဲ့ပုံတွေပါပဲ။
၂။ သေဆုံးသွားတဲ့ စစ်သည်ရဲ့ သွေးကို သောက်တဲ့ ရောမခေတ် (အေဒီ ၁ရာစု)
ရောမခေတ်တုန်းကဆိုရင် လူထုကို ဖျော်ဖြေဖို့ လူသတ်ကွင်းကြီးထဲမှာ စစ်သည်အချင်းချင်း အသေအကြေသတ်ဖြတ်ကြတယ်။ နိုင်တဲ့စစ်သည်က သေဆုံးတဲ့သူရဲ့ သွေးကို သောက်လေ့ရှိတယ်။
သေဆုံးသွားတဲ့ စစ်သည်ရဲ့ သွေးကို သောက်တဲ့ ရောမခေတ်
ရောမစစ်သည်တွေက သွေးသောက်ရင် ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကို ကုသနိုင်တယ်လို့လည်း ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ ရဲရင့်ဖြတ်လတ်စေတယ်လို့လည်း ထင်ထားတယ်။ အေဒီ ၄ရာစုမှာ လူသတ်ပွဲကြီးတွေ တားမြစ်ခဲ့ပေမယ့် သွေးသောက်တဲ့ဓလေ့က ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ထားလို့ အခုချိန်ထိ မပျောက်သေးပါဘူး။
၃။ တာအိုယုံကြည်သူတွေက လိပ်ဥ၊ ကြိုးကြာဥတွေ စားကြတယ် (အေဒီ ၃ဝဝ)
အေဒီ ၃ဝဝတုန်းက တာအိုသက်ဝင်ယုံကြည်သူ (Taoists) တွေဟာ သစ်သီးသစ်ရွက်နဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေသာမက လိပ်ဥနဲ့ ကြိုးကြာဥတွေကိုလည်း အသက်ရှည်ကျန်းမာစေဖို့နဲ့ လိင်စိတ်နည်းပါးစေဖို့ စားသုံးကြပါတယ်။
လိင်စိတ်လျော့နည်းဖို့ လိပ်ဥနဲ့ ကြိုးကြာဥတွေကို စားကြတဲ့ တာအိုဘာသာဝင်
တာအိုယုံကြည်သူတွေက အသားငါး၊ ဆန်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ကြပါတယ်။
၄။ ရွှေအရည်နဲ့ မျောက်ဦးနှောက်ကို စားရင် အသက်၅ဝဝအထိ ရှည်သတဲ့ (အေဒီ ၄ရာစု)
တရုတ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဂျီဟောင် (Ge Hong) ဟာ မအိုဆေးအကြောင်းအရာတွေကို ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုသာ ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်သွားမယ်ဆိုရင် လူတိုင်းအသက်ရှည်နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ရွှေနဲ့မျောက်ဦးနှောက်ပေါင်းလိုက်ရင် နှစ်၅ဝဝထိ အသက်ရှည်သတဲ့
ဘယ်တော့မှ မပျက်စီးတဲ့ရွှေကို အရည်ဖျော်ပြီးတော့ မျောက်ဦးနှောက်ကို ပေါင်းစပ်စားသောက်မယ်ဆို နှစ်၅ဝဝအထိ အသက်ရှည်နိုင်ပါတယ်လို့ ဂုရုကြီး ဂျီဟောင်က အခိုင်အမာပြောထားပါသေးတယ်။
၅။ မြွေပွေးဝိုင်ကို သောက်ရင် အသက်ရှည်သတဲ့ ( အေဒီ ၁၃ရာစု)
အင်္ဂလိပ်တွေးခေါ်ပညာရှင် ရောဂျာဘာကွန် (Roger Bacon) ဟာ အသက်ရှည်ဆေးကြီးအကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။ ရွှေ၊ သစ်တော်သီး၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သန္တာကောင်နဲ့ သမင်အရိုးတွေကို ရောစပ်ထားတဲ့ အမှုန့်နဲ့ ဝိုင်နဲ့ ရောသောက်မယ်ဆိုရင် “မအိုဆေး” ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြွေပွေးဝိုင်ကို သောက်ရင် အသက်ရှည်သတဲ့
သူနဲ့ခေတ်ပြိုင် တွေးခေါ်ပညာရှင် ဂယ်လန် (Galen) ကလည်း အမှုန့်တွေကို မြွေပွေးစိမ်ထားတဲ့ဝိုင်နဲ့ ရောသောက်သင့်ပါတယ်လို့ ထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။
၆။ အသားအရေလှအောင် ရွှေနဲ့ကလိုရင်းကို ရောစပ်သောက်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်မိဖုရားကြီး (အေဒီ ၁၆ရာစု)
၁၅၅ဝခုနှစ်ဝန်းကျင်တုန်းက ပြင်သစ်ဘုရင်ဟင်နရီ-၂ (King Henry II) ရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့ ဒိုင်ယာနီ ဒီပွိုက်တီးယား (Diane de Poitiers) ဟာဆိုရင် အရွယ်တင်နုပျိုအောင်လို့ ရွှေနဲ့ကလိုရင်းဒြပ်ပေါင်း (Gold Chloride) ကို Diethyl Ether နဲ့ရောစပ်သောက်ခဲ့ပါတယ်။ မိဖုရားကြီးဟာ ဘုရင်ကြီးထက် အသက်၂ဝနီးပါးကြီးတဲ့အတွက် ရုပ်မရင့်အောင်လို့ ဆေးဝါးမှီဝဲတဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပင့်ကူအိမ်၊ တီကောင်၊ ဖားဥနဲ့ ကင်းဆီတွေကို ရောနှောပြီးတော့ သောက်သုံးခဲ့ပါတယ်။
Gold Chloride ကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ မိဖုရားကြီး Diane de Poitiers
မိဖုရားကြီးဟာ ၆၆နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပေမယ့် အသက်၃ဝလောက်ပဲ ထင်ရလောက်အောင် နုပျိုတယ်လို့ စာဆိုတော်တွေ ချဲ့ကားရေးသားကြပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ Gold Chloride ဟာ လူကို အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ နောက်ပိုင်းမှသိခဲ့ရပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင် ဖီးလစ် ချာလီးယား (Philippe Charlier) ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ နော်မန်ဒီဒေသ (Normandy) မှာရှိတဲ့ မိဖုရားကြီးရဲ့အုတ်ဂူကို တူးဖော်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ မိဖုရားကြီးမှာ ဆံပင်ကောင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းက Gold Chloride ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပြီး အသားအရေဖြူရတဲ့အကြောင်းက အဆိပ်ဖြစ်ပြီး သွေးအားနည်းလာတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ မရဏကို အံတုဖို့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့လူ သွေးရောရတယ် (အေဒီ ၁၇ရာစု)
၁၇ရာစုမှာလည်း အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ မရဏကို အံတုနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို တီထွင်ကြံဆကြပါသေးတယ်။ ၁၆၃၈ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်ဘုရင်ကြီးချာလ်-၂ (Charles II of England ) ရဲ့ ရူပဗေဒပညာရှင် တိုဘီရာစ် ဝစ်တိတ်ကာ (Tobias Whitaker) ဟာ အသက်ရှည်ကျန်းမာစေဖို့ ဝိုင်သောက်ကြပါလို့ အခိုင်အမာတိုက်တွန်းထားသေးတယ်။
မရဏကို အံတုဖို့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့လူ သွေးရောရတဲ့ ဒေါက်တာ Jean Baptiste Denis
ဒီတစ်ခါ ကြံခဲ့တာက တိရိစ္ဆာန်ကနေ လူဆီကို သွေးရောမယ့်အကြံပါ။ သွေးထွက်လွန်နေတဲ့ ၁၅နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ဒေါက်တာ ဂျင်ဘက်တက်စတီ ဒန်းနစ် (Jean Baptiste Denis) ဟာ သိုးတစ်ကောင်ဆီကနေ သွေးသွင်းပြီး ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။
၈။ အသက်ရှည်ချင်ရင် ကောင်မလေးဘေးနားမှာ လဲလျောင်းပါ (အေဒီ ၁၈ရာစု)
ဂျာမန်ရူပဒေဗဒပညာရှင် ခရစ္စတိုဖာ ဟုလမ်း (Christoph Hufeland) ကတော့ အသက်ရှည်စေမယ့်နည်းလမ်းကောင်းကြီးကို “The Art of Prolonging Life” မှာ ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။
ပညာရှင်ကြီး ခရစ္စတိုဖာ ဟုလမ်း
အသက်ငယ်ငယ်ကောင်မလေးဘေးနားမှာ လိင်ကိစ္စမလုပ်ဘဲ လဲလျောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် နုပျိုမှုတွေကို ကူးစက်သလိုဖြစ်တဲ့အတွက် အသက်ရှည်စေပါတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
၉။ အသက်ရှည်ချင်ရင် သုတ်ရည်ထိုးသွင်းပါ (အေဒီ ၁၉ရာစု)
၁၈၈၉ခုနှစ်မှတော့ ရူပဗေဒပညာရှင် Charles Edouard Brown-Sequard ဟာ ခွေးနဲ့ပူးတွေရဲ့ဝှေးစေ့တွေကို သုတေသနပြုလုပ်ပြီး ဝှေးစေ့ဟာ အသက်ရှည်ဆေးကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလာပြန်ပါတယ်။ Charles Edouard Brown-Sequard ဟာ သုတ်ရည်၊ ဝှေစေ့၊ ဝှေးစေ့သွေးတွေ ရောစပ်ထားတဲ့အရည်တွေကို ခြေထောက်နဲ့လက်တွေမှာ ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။
သုတ်ရည်ထိုးသွင်းခဲ့တဲ့ Charles Edouard Brown-Sequard
ထိုးသွင်းပြီးနောက်မှာ ၇၂နှစ်ရှိတဲ့ Charles Edouard Brown-Sequard ဟာ ငယ်မူငယ်သွေးပြန်ကြွပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွလို့နေပါတယ်။
၁ဝ။ အမျိုးသား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိပ်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ (အေဒီ ၂ဝရာစု)
၁၉၂ဝခုနှစ်မှာ အမျိုးသားတွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိပ်မှုတွေကို ဒေါက်တာ အူဂင် စတိန်နာ (Eugen Steinach) က ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တာ အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိပ်နေတဲ့ ဒေါက်တာ Serge-Voronoff
ဒေါက်တာ ဆာဂျီ ဗော်ရွန်နော့ (Serge Voronoff) ဟာ မျောက်တွေရဲ့ဝှေးစေ့တွေကို လူပေါင်း ၁ထောင်ကျော်ဆီ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးတဲ့အခါ ပိုပြီးကျန်းမာလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၁၁။ မျက်နှာအရေပြားလှပဖို့ ဆီးနဲ့ စမ်းသပ်နေ (အေဒီ ၂၁ရာစု)
ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက အိုမင်းလာတဲ့ဇရာကို အံတုလာလိုက်ကြတာ အခုဆိုရင် ၂၁ရာစုတောင် ရောက်လို့လာပါပြီ။ ၂၁ရာစုက သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အရေပြားပါရဂူတွေကလည်း ခေသူမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်နှာမှာ အရေပြားအက်ကွဲတာတွေ အရေးအကြောင်းပေါ်မှာတွေ မှဲ့ခြောက်တင်းတိတ်တွေကို အံတုဖို့ မျက်နှာသစ်ဆေးတွေမှာ ဆီးကို အသုံးပြုလာပါပြီ။ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အရေပြားအရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတွေ အရောင်ကျလာတာကို ဆီးက အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။
သုတ်ရည်ပါတဲ့ဆေးနဲ့ မျက်နှာလိမ်းနေတဲ့ ၂၁ရာစုမိန်းမပျို
သုတ်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကြောင့် သုတ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေကလည်း အရေပြားကို လှပတင့်တယ်စေပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖီလားယ်ဖီးရားမြို့ (Philadelphia) မှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ Bioquark ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင် သေဆုံးသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ကိုတောင် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိအောင် ဆေးထိုးနိုင်တယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုထားပါသေးတယ်။
ကဲ . . . ဒါတွေကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထိန်းချုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့နည်းတွေက ရယ်စရာကောင်းသလို တချို့နည်းတွေက နည်းလမ်းမကျပါဘူး။ “အို၊ နာ၊ သေ” ဆိုတာ လူတိုင်းရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်တဲ့ လောကနိယာမတရားကြီးပါ။ အသက်ရှင်သန်နေတုန်း မကောင်းမှုတွေ ရှောင်ခွာပြီး ကောင်းမှုတွေ လုပ်ကိုင်ကာ စိတ်ထားကောင်းနဲ့ အသက်ရှင်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
ခတျေအဆကျဆကျမှာ ဇရာကို ပေါကျကရနညျးတှနေဲ့ ဘယျလိုအံတုခဲ့လဲ
မွနျမာတှမှောတော့ အမြိုးသားတဈယောကျ ကလေးရအောငျ မစှမျးဆောငျနိုငျဘူးဆိုရငျ ဆိတျဝှေးစေ့ စားရတာတို့၊ ကလေးတှေ အသကျ၅နှဈလောကျ ရောကျတဲ့အထိ စကားမပွောတတျသေးရငျ ကွကျဖငျဆီဖူး စားရတာတှကေတော့ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ သိပ်ပံပညာနဲ့ကွညျ့ရငျ တခွားသူတှကေ ပေါကွောငျကွောငျလို့ပဲမွငျပါစဦေး ကိုယျ့တှကေတော့ လုပျမွဲတိုငျး လုပျနဦေးမှာပဲ။ ဒီလိုပါပဲ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာလညျး အို ၊ နာ ၊ သကေို အံတုခဲ့တဲ့ ဆေးပညာကွိုးပမျးမှုတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ မွညျးနို့နဲ့ ရခြေိုးခဲ့တဲ့ အီဂဈြဘုရငျမ ကယျလီယို ပတျထရာ (ဘီစီ ၁ရာစု)
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ၂ထောငျကြျောက အီဂဈြဘုရငျမ ကယျလီယို ပတျထရာ (Queen Cleopatra) ဟာ အသားအရလှေပဖို့အတှကျ အခဉျြဖောကျထားတဲ့ မွညျးနို့နဲ့ ရခြေိုးခဲ့ပါတယျ။ အခဉျြဖောကျထားတဲ့ မွညျးနို့မှာ ပါဝငျတဲ့ လကျတဈအကျဆဈ (Latic Acid) ဟာ အရပွေားရဲ့အပျေါဆုံးအလှာမှရှိတဲ့ နူးညံ့ခြောမှစေ့လေို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဘုရငျကွီး ဂြူးလီးယကျဆီဇာဟာ ဆံပငျအနညျးငယျပွောငျလာတဲ့အတှကျ ဆံပငျတှပွေနျပေါကျဖုိ့ ဆေးဝါးတှေ သုံးခဲ့ပါသေးတယျလို့ သုတသေီတှကေ ဆိုပါတယျ။ မိတျကပျကို မိကြောငျးခြေးနဲ့ ဖျောစပျပွီးတော့ လိမျးခွယျလရှေိ့ပွီး မကျြလုံးတှကေို ကွေးစိမျး၊ ခဲမဲတှနေဲ့ အလှဆငျထားပါတယျ။ သိပ်ပံနညျးကတြှေးကွညျ့ရငျ ထူးဆနျးလှပမေယျ့ သူ့ခတျေသူ့ခါတုနျးက အိုမငျးလာတဲ့ ဇရာကို အံတုခဲ့ပုံတှပေါပဲ။
၂။ သဆေုံးသှားတဲ့ စဈသညျရဲ့ သှေးကို သောကျတဲ့ ရောမခတျေ (အဒေီ ၁ရာစု)
ရောမခတျေတုနျးကဆိုရငျ လူထုကို ဖြျောဖွဖေို့ လူသတျကှငျးကွီးထဲမှာ စဈသညျအခငျြးခငျြး အသအေကွသေတျဖွတျကွတယျ။ နိုငျတဲ့စဈသညျက သဆေုံးတဲ့သူရဲ့ သှေးကို သောကျလရှေိ့တယျ။
ရောမစဈသညျတှကေ သှေးသောကျရငျ ဝကျရူးပွနျရောဂါကို ကုသနိုငျတယျလို့လညျး ယုံကွညျခဲ့ကွတယျ။ ရဲရငျ့ဖွတျလတျစတေယျလို့လညျး ထငျထားတယျ။ အဒေီ ၄ရာစုမှာ လူသတျပှဲကွီးတှေ တားမွဈခဲ့ပမေယျ့ သှေးသောကျတဲ့ဓလကေ့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျစတေယျလို့ ယုံကွညျထားလို့ အခုခြိနျထိ မပြောကျသေးပါဘူး။
၃။ တာအိုယုံကွညျသူတှကေ လိပျဥ၊ ကွိုးကွာဥတှေ စားကွတယျ (အဒေီ ၃ဝဝ)
အဒေီ ၃ဝဝတုနျးက တာအိုသကျဝငျယုံကွညျသူ (Taoists) တှဟော သဈသီးသဈရှကျနဲ့ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျတှသောမက လိပျဥနဲ့ ကွိုးကွာဥတှကေိုလညျး အသကျရှညျကနျြးမာစဖေို့နဲ့ လိငျစိတျနညျးပါးစဖေို့ စားသုံးကွပါတယျ။
တာအိုယုံကွညျသူတှကေ အသားငါး၊ ဆနျနဲ့ ဖနျတီးထားတဲ့ အစားအသောကျတှကေို ရှောငျကွဉျကွပါတယျ။
၄။ ရှအေရညျနဲ့ မြောကျဦးနှောကျကို စားရငျ အသကျ၅ဝဝအထိ ရှညျသတဲ့ (အဒေီ ၄ရာစု)
တရုတျအတှေးအချေါပညာရှငျ ဂြီဟောငျ (Ge Hong) ဟာ မအိုဆေးအကွောငျးအရာတှကေို ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။ အစားအသောကျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျး၊ လိငျမှုကိစ်စနဲ့ အသကျရှူလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေိုသာ ပေါငျးစပျလုပျကိုငျသှားမယျဆိုရငျ လူတိုငျးအသကျရှညျနိုငျပါတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
ဘယျတော့မှ မပကျြစီးတဲ့ရှကေို အရညျဖြျောပွီးတော့ မြောကျဦးနှောကျကို ပေါငျးစပျစားသောကျမယျဆို နှဈ၅ဝဝအထိ အသကျရှညျနိုငျပါတယျလို့ ဂုရုကွီး ဂြီဟောငျက အခိုငျအမာပွောထားပါသေးတယျ။
၅။ မွှပှေေးဝိုငျကို သောကျရငျ အသကျရှညျသတဲ့ ( အဒေီ ၁၃ရာစု)
အင်ျဂလိပျတှေးချေါပညာရှငျ ရောဂြာဘာကှနျ (Roger Bacon) ဟာ အသကျရှညျဆေးကွီးအကွောငျး ရေးသားခဲ့ပါသေးတယျ။ ရှေ၊ သဈတျောသီး၊ ကြောကျမီးသှေး၊ သန်တာကောငျနဲ့ သမငျအရိုးတှကေို ရောစပျထားတဲ့ အမှုနျ့နဲ့ ဝိုငျနဲ့ ရောသောကျမယျဆိုရငျ “မအိုဆေး” ဖွဈပါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သူနဲ့ခတျေပွိုငျ တှေးချေါပညာရှငျ ဂယျလနျ (Galen) ကလညျး အမှုနျ့တှကေို မွှပှေေးစိမျထားတဲ့ဝိုငျနဲ့ ရောသောကျသငျ့ပါတယျလို့ ထပျလောငျးပွောဆိုထားပါတယျ။
၆။ အသားအရလှေအောငျ ရှနေဲ့ကလိုရငျးကို ရောစပျသောကျခဲ့တဲ့ ပွငျသဈမိဖုရားကွီး (အဒေီ ၁၆ရာစု)
၁၅၅ဝခုနှဈဝနျးကငျြတုနျးက ပွငျသဈဘုရငျဟငျနရီ-၂ (King Henry II) ရဲ့မိဖုရားဖွဈတဲ့ ဒိုငျယာနီ ဒီပှိုကျတီးယား (Diane de Poitiers) ဟာဆိုရငျ အရှယျတငျနုပြိုအောငျလို့ ရှနေဲ့ကလိုရငျးဒွပျပေါငျး (Gold Chloride) ကို Diethyl Ether နဲ့ရောစပျသောကျခဲ့ပါတယျ။ မိဖုရားကွီးဟာ ဘုရငျကွီးထကျ အသကျ၂ဝနီးပါးကွီးတဲ့အတှကျ ရုပျမရငျ့အငာငျလို့ ဆေးဝါးမှီဝဲတဲ့ သဘောပဲဖွဈပါတယျ။ ပငျ့ကူအိမျ၊ တီကောငျ၊ ဖားဥနဲ့ ကငျးဆီတှကေို ရောနှောပွီးတော့ သောကျသုံးခဲ့ပါတယျ။
မိဖုရားကွီးဟာ ၆၆နှဈအရှယျမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပမေယျ့ အသကျ၃ဝလောကျပဲ ထငျရလောကျအောငျ နုပြိုတယျလို့ စာဆိုတျောတှေ ခြဲ့ကားရေးသားကွပမေယျ့ တကယျတမျးတော့ Gold Chloride ဟာ လူကို အဆိပျဖွဈစတေဲ့ဒွပျပေါငျးဖွဈတယျဆိုတာ နောကျပိုငျးမှသိခဲ့ရပါတယျ။ သုတသေနပညာရှငျ ဖီးလဈ ခြာလီးယား (Philippe Charlier) ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့ဟာ ပွငျသဈနိုငျငံ နျောမနျဒီဒသေ (Normandy) မှာရှိတဲ့ မိဖုရားကွီးရဲ့အုတျဂူကို တူးဖျောခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ မိဖုရားကွီးမှာ ဆံပငျကောငျးရခွငျးရဲ့အကွောငျးက Gold Chloride ရဲ့ဘေးထှကျဆိုးကြိုးဖွဈပွီး အသားအရဖွေူရတဲ့အကွောငျးက အဆိပျဖွဈပွီး သှေးအားနညျးလာတဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။
၇။ မရဏကို အံတုဖို့ တိရိစ်ဆာနျနဲ့လူ သှေးရောရတယျ (အဒေီ ၁၇ရာစု)
၁၇ရာစုမှာလညျး အတှေးအချေါပညာရှငျတှနေဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှဟော မရဏကို အံတုနိုငျမယျ့နညျးလမျးတှကေို တီထှငျကွံဆကွပါသေးတယျ။ ၁၆၃၈ခုနှဈမှာ အင်ျဂလနျဘုရငျကွီးခြာလျ-၂ (Charles II of England ) ရဲ့ ရူပဗဒေပညာရှငျ တိုဘီရာဈ ဝဈတိတျကာ (Tobias Whitaker) ဟာ အသကျရှညျကနျြးမာစဖေို့ ဝိုငျသောကျကွပါလို့ အခိုငျအမာတိုကျတှနျးထားသေးတယျ။
ဒီတဈခါ ကွံခဲ့တာက တိရိစ်ဆာနျကနေ လူဆီကို သှေးရောမယျ့အကွံပါ။ သှေးထှကျလှနျနတေဲ့ ၁၅နှဈအရှယျကောငျလေးတဈယောကျကို ဒေါကျတာ ဂငျြဘကျတကျစတီ ဒနျးနဈ (Jean Baptiste Denis) ဟာ သိုးတဈကောငျဆီကနေ သှေးသှငျးပွီး ကယျဆယျခဲ့ပါတယျ။
၈။ အသကျရှညျခငျြရငျ ကောငျမလေးဘေးနားမှာ လဲလြောငျးပါ (အဒေီ ၁၈ရာစု)
ဂြာမနျရူပဒဗေဒပညာရှငျ ခရစ်စတိုဖာ ဟုလမျး (Christoph Hufeland) ကတော့ အသကျရှညျစမေယျ့နညျးလမျးကောငျးကွီးကို “The Art of Prolonging Life” မှာ ထညျ့သှငျးရေးသားထားပါတယျ။
အသကျငယျငယျကောငျမလေးဘေးနားမှာ လိငျကိစ်စမလုပျဘဲ လဲလြောငျးလိုကျမယျဆိုရငျ နုပြိုမှုတှကေို ကူးစကျသလိုဖွဈတဲ့အတှကျ အသကျရှညျစပေါတယျလို့ ရေးသားထားပါတယျ။
၉။ အသကျရှညျခငျြရငျ သုတျရညျထိုးသှငျးပါ (အဒေီ ၁၉ရာစု)
၁၈၈၉ခုနှဈမှတော့ ရူပဗဒေပညာရှငျ Charles Edouard Brown-Sequard ဟာ ခှေးနဲ့ပူးတှရေဲ့ဝှေးစတှေ့ကေို သုတသေနပွုလုပျပွီး ဝှေးစဟေ့ာ အသကျရှညျဆေးကွီးတဈပါးဖွဈတယျလို့ ဆိုလာပွနျပါတယျ။ Charles Edouard Brown-Sequard ဟာ သုတျရညျ၊ ဝှစေေ့၊ ဝှေးစသှေ့ေးတှေ ရောစပျထားတဲ့အရညျတှကေို ခွထေောကျနဲ့လကျတှမှော ထိုးသှငျးလိုကျပါတယျ။
ထိုးသှငျးပွီးနောကျမှာ ၇၂နှဈရှိတဲ့ Charles Edouard Brown-Sequard ဟာ ငယျမူငယျသှေးပွနျကွှပွီး လနျးဆနျးတကျကွှလို့နပေါတယျ။
၁ဝ။ အမြိုးသား လိငျပိုငျးဆိုငျရာခှဲစိပျပွုပွငျခဲ့တဲ့ ဒေါကျတာ (အဒေီ ၂ဝရာစု)
၁၉၂ဝခုနှဈမှာ အမြိုးသားတှေ ကနျြးမာသနျစှမျးဖို့အတှကျ လိငျပိုငျးဆိုငျရာခှဲစိပျမှုတှကေို ဒေါကျတာ အူဂငျ စတိနျနာ (Eugen Steinach) က ဦးဆောငျလှုပျရှားခဲ့တာ အောငျမွငျမှုတှရေခဲ့ပါတယျ။
ဒေါကျတာ ဆာဂြီ ဗျောရှနျနော့ (Serge Voronoff) ဟာ မြောကျတှရေဲ့ဝှေးစတှေ့ကေို လူပေါငျး ၁ထောငျကြျောဆီ ပွောငျးလဲတပျဆငျပေးတဲ့အခါ ပိုပွီးကနျြးမာလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
၁၁။ မကျြနှာအရပွေားလှပဖို့ ဆီးနဲ့ စမျးသပျနေ (အဒေီ ၂၁ရာစု)
ဟိုးရှေးရှေးကတညျးက အိုမငျးလာတဲ့ဇရာကို အံတုလာလိုကျကွတာ အခုဆိုရငျ ၂၁ရာစုတောငျ ရောကျလို့လာပါပွီ။ ၂၁ရာစုက သိပ်ပံပညာရှငျတှေ အရပွေားပါရဂူတှကေလညျး ခသေူမဟုတျပါဘူး။ မကျြနှာမှာ အရပွေားအကျကှဲတာတှေ အရေးအကွောငျးပျေါမှာတှေ မှဲ့ခွောကျတငျးတိတျတှကေို အံတုဖို့ မကျြနှာသဈဆေးတှမှော ဆီးကို အသုံးပွုလာပါပွီ။ မကျြနှာမှာရှိတဲ့ အရပွေားအရောငျခွယျပစ်စညျးတှေ အရောငျကလြာတာကို ဆီးက အကောငျးဆုံးထိနျးခြုပျပေးပါတယျ။
သုတျမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျဓာတျတှကွေောငျ့ သုတျနဲ့ ထုတျလုပျထားတဲ့ ဆေးဝါးတှကေလညျး အရပွေားကို လှပတငျ့တယျစပေါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံ ဖီလားယျဖီးရားမွို့ (Philadelphia) မှာ အခွစေိုကျထားတဲ့ Bioquark ကုမ်ပဏီဟာဆိုရငျ သဆေုံးသှားတဲ့လူတဈယောကျရဲ့ ဦးနှောကျကိုတောငျ ပွနျလညျအလုပျလုပျနိုငျစှမျးရှိအောငျ ဆေးထိုးနိုငျတယျလို့ အခိုငျအမာပွောဆိုထားပါသေးတယျ။
ကဲ . . . ဒါတှကေတော့ ခတျေအဆကျဆကျမှာ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကို နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ထိနျးခြုပျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ တခြို့နညျးတှကေ ရယျစရာကောငျးသလို တခြို့နညျးတှကေ နညျးလမျးမကပြါဘူး။ “အို၊ နာ၊ သေ” ဆိုတာ လူတိုငျးရှောငျလှဲလို့ မရနိုငျတဲ့ လောကနိယာမတရားကွီးပါ။ အသကျရှငျသနျနတေုနျး မကောငျးမှုတှေ ရှောငျခှာပွီး ကောငျးမှုတှေ လုပျကိုငျကာ စိတျထားကောငျးနဲ့ အသကျရှငျကွပါလို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။